USergio Busquets Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka
Ikhaya STARS E-EUROPE USergio Busquets Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka
I-LB ibonisa iNdaba ephelele yeBhola Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso; "El Pulpo". Izindaba zethu ze-Sergio Busquets Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngesitayela sakhe sokudlala ku-FC Barcelona. Kodwa-ke, bambalwa abambheka i-Bio ka-Sergio Busquet okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
USergio Busquets Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe BukaUkuphila Kwangaphambilini Nomndeni
USergio Busquets Burgos wazalwa ngosuku lwe-16th ngoJulayi 1988 kunina, uLoli Burgos nobaba, uCarles Busquets, bobabili abafanekiselwa ngezansi eSergio Busquets Family Photo.
USergio wazalwa esizukulwaneni sesibili somndeni webhola. Wakhulela e-Sabadell, eBarcelona ngenkathi edlala ibhola nomfowabo u-Aitor Busquets (okufanekiselwa naye ngezansi) ngesikhathi besencane.
Uyise, I-Carles, naye wayengumdlali webhola lezinyawo, owayengumgcini wegoli waseBarcelona owahlala eqenjini iminyaka eminingana phakathi ne-1900s, nakuba ngokuvamile asetshenziswa njengesipele. USergio wayehlelwe ukuba abe ngumdlali webhola ngenxa yophiko wakhe owayelokhu efuna umfana wakhe ukuba alandele izinyathelo zakhe. Ekhethwe ngezansi, ukuzimisela kwakhe ukuba ngumfana nobaba wakhe akuyona iphutha elidlula.
Ukuthembeka Kukho Emndenini WaseSergio: Ubaba wakhe, uCarles Busquets wayengumdlali wezinyawo othembekile okhuthazele ukusetshenziselwa ukukhetha iminyaka emibili ngesikhathi sakhe e FC FC. Ngemuva kokuthi kuthiwa ulahlekelwe emncintiswaneni weqembu lokuqala lokulinda umdlalo weBarca, uCharles waqinisekisa ukuthi indodana yakhe, uSergio uqale umsebenzi wakhe esikoleni esiphansi sezemfundo. Inhloso yayiwukuqinisekisa ukuthi u-Sergio omncane ubhekene nokuncintisana okuncane futhi aphakamise phezulu.
USergio Busquets Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe BukaIsifinyezo somsebenzi
Lapho eneminyaka engu-7 kuphela ngonyaka we-1995, amaBusquets aqala uhambo lwakhe lwebhola leBadia. Ngemva kokuchitha inkathi lapho, wathuthela ku-CEF Barberà Andalucía e-1996 futhi wahlala khona iminyaka emithathu. USergio wabe esejoyina esikoleni sika-UE Lleida e-1999 ngenxa yakhe isinqumo esicasulayo sikababa ukushiya FC Barcelona.
Ubani owacasula uSergio Busquets uBaba: USergio wafika eLleida esikoleni sezemidlalo ngenxa yezizathu zobuchwepheshe zikayise, uCarles, owayekhungathekile ULouis van Gaal (owayengumqeqeshi weBafana Barcelona) owayeka ukubekezela, ngakho wamphoqa ukuba ashiye uBarça ukuze asayine uLleida.
Kuyinto efanelekile ukuphawula ukuthi uJoseph Mourinho uboniswe ngezansi) nguye owayengumqeqeshi weC FC Barcelona ngesikhathi uCarles ehamba.
UCarles Busquets wahamba nomndeni wakhe phakathi kwabo uSergio, owadingeka ashiye iqembu lakhe elisha, u-Unió Esportiva Barberà ukuba adlale eLleida lapho ehlala khona iminyaka emithathu. USergio Busquets wenyuka ngaphezu kwayo yonke intsha, waba ngumdlali weqembu elihle kakhulu eqembu lakhe njengoba ehola iqembu lakhe ukunqoba umdlalo omkhulu.
Ngemuva kokuba ubaba ethathe umhlalaphansi e-Lleida e-2002, uSergio Busquets wazizwa engajabuli eqenjini elizwa ukuthi akukho okunye okumele alwe nalo, ngakho-ke isidingo sokuthuthela ezingeni eliphezulu. Wadluliselwa eJàbac Terrassa e-2003 wabe esethatha iminyaka emibili esikoleni ngaphambi kokuba ahlaselwe yiFc Barcelona football academy, uLasia. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
USergio Busquets Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe BukaUkuphila Ubudlelwano
Ngaphambi kwayo yonke indoda enhle, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo inkulumo iya. Futhi ngemuva kwayo yonke i-FC Barcelona Footballer ephumelele, kune-wag orous girlfriend ebonakalayo egameni lika-Elena Galera Moron (elifanekiselwa uthando lokuphila kwakhe ngezansi).
Njengesikhathi sokubhala, uSergio Busquets ukhona manjely engashadile mhlawumbe ngenxa yezizathu ezithile zangasese. Kodwa-ke, uye waba nobuhlobo besikhathi eside nomlingani wakhe u-Elena Galera Moron owahlangana naye ku-2013. Ubuhlobo babo buye baqhubeka bekhula kusukela behlangana. Ngesikhathi bonke abadlali beCc Barcelona bebezoshada, uSergio onguMillionaire ku-30 (isikhathi sokubhala) wenqabe ukushada kodwa wanquma ukuzala.
Ngosuku lwe-8th ka-March 2016, uSergio no-Elena bamamukela ingane yabo yokuqala nendodana abayibamba nge-Enzo. Ngaphansi kwe-Enzo encane ekhangayo kakhulu nabazali bakhe.
Isikhathi esikhethekile somndeni kaSergio Busquets siphelile imikhosi yezintambo, isikhathi lapho bobabili u-Elina no-Enzo bejoyina uSergio nawo wonke umndeni weCc Barcelona ukuba ubisi umzuzu.
Ukuthatha izinyanga nezinja zabo ngemuva kwemikhosi yezintambo noma ukuphela kwenkathi kuvamile kuSergio Busquets nomndeni wakhe.
Ukukhuluma ngezinja, kubalulekile ukuchaza ukuthi lo mbhangqwana unezinhlamvu ezimbili ezincane ezibizwa ngokuthi uMinnie noLily abafanekiselwa ngezansi.
Ukubona kalula izinja ezingenhla kufana nalokho okubonwa esithombeni esitholakale somndeni kaSergio Busquets. Ngokuyinhloko, ukufaniswa nezinja kuvamile kubadlali be FC FC. Ngezansi Lionel Messi ukuphumula nenja yakhe eyathola ukukhula okuphawulekayo phakathi kukaFebhuwari kuya kuSepthemba 2016.
Futhi ngo-Ephreli 2018, bobabili uSergio no-Elina baveze emithonjeni yezokuxhumana ukuthi babelindele ingane yesibili.
USergio Busquets Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe BukaAma-Tattoo Facts
Leli qiniso lembula okuningi mayelana nomlando womndeni wakwaSergio Busquets ongaba nemiphumela ethile yama-Arabhu ngenxa yesithombe sakhe sase-Arabhu ngakwesobunxele sakhe sesobunxele. Sergio Busquets Umbhalo we-Arabic uhumusha;
"Into kuwe, ukuphila ezweni lakithi",
Uzinikezela umdwebo wakhe kumkhulu wakhe omama abesondelene naye ngaphambi kokufa kwakhe.
USergio Busquets Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe BukaFacts Lanky
Ngibheka ngokucophelela esithombeni esingezansi, ukubukeka kukaSergio kubonisa ukubuka kobu-Arabhiya. Ngezinye izikhathi, abantu bebelokhu bezibuza ukuthi uSergio Busquets uthola amandla akhe ekucabangeni uhlaka lwakhe lwama-lanky.
Ukukhipha ibhola, imilenze yaseSergio Busquets 'lanky kanye nezandla zihlale zisebenza kakhulu. Lokhu kubonakala sengathi uyakwazi ukumboza umhlaba ngokumangalisayo ngokusheshayo futhi unomphela ukubandakanya abagijimi abaphikisayo bebhola, ebabeka endaweni engapheli.
Abadlali bebhola abanesikhathi esiningi bakuthola kunzima ukukala ukuthi isandla sikaSergio esikhulu kangakanani sokuvimbela nokubhekana nesimo.
USergio Busquets Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe BukaCover Trust
USergio Busquets ukhululekile kakhulu emdlalweni. Uletha ukuthula kanye nesembozo esikhulu sokuzivikela esimweni sakhe semaphakathi.
Kwakungenxa yokuthi uyakwazi ukuhlinzeka ikhava enkulu kulowo mdlalo UCarles Puyol wamnika ijezi lebhola ngesikhathi sokuthatha umhlalaphansi.
Ngaphandle kokungabaza, iphutha elivela kuSergio Busquets lishiya ukuzivikela kweqembu lakhe emasongweni. Ikhono likaSergio lokufunda lo mdlalo kwenza kube lula ngaye ukwenza izinkinga eziyigugu. Kuhlale kunzima ukuthola kufana nokuthanda esikhundleni saseSpain.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Sergio Busquets Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.